लेखनमा रुची भएकालाई बुद्धि सागरका १० टिप्स • Pokhara News by Ganthan
लेखनामा रुची भएकाहरुलाई लेखक बुद्धि सागरले दिएका १० टिप्सहरु उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
लेखनमारुची भएका मित्रहरु लेखनका लागि सुझाव मागिरहनुहुन्छ । त्यसैले मैले सामान्य १० वटा सुझाव बनाएको छु, आशा छ, काम लाग्दो नै होला ।
२ – प्रा. डा. डिपी भण्डारी भन्नुहुन्छ— ‘लेखनको विषय त कुकुरको पुच्छर पनि हुन्छ तर त्यसलाई लेख्ने शैली भने आफ्नो चाहिन्छ ।’ शैली श्रमले बन्दैन । आफूलाई जसरी लेख्न मन लाग्छ, त्यसरी नै लेख्न थाल्नुस् । आफूभित्रको सर्जकलाई पागलपन दिनुस् । लेख्दै जाँदा आफूले पढेका लेखक र कृतिभन्दा एकदमै फरक हुन थाल्यो भने नआत्तिनुस्, खुशी हुनुस्, तपाई आफ्नो शैली निर्माण गर्दे हुनुहुन्छ ।
३- पुस्तकको पहिलो अध्याय नै महान लेख्छु भनेर सोच्न थाल्नु भयो भने सोच्दासोच्दे समय घर्किन सक्छ । मार्खेज भन्छन्— ‘पुस्तकको पहिलो हरफले अन्तिम हरफ निर्माण गर्छ ।’ तर, मलाई लाग्छ— प्रायः पुस्तकले पहिलो हरफ बिचतिरबाट पाउँछ । लेख्दै गएपछि, जव पुस्तकले एउटा आकार पाउँछ, त्यति नै बेला, पहिलो अध्याय पनि पाउँछ । धेरै लेखकहरु पहिलो खण्ड पुस्तकको बिचतिरबाट निकालेर अगाडी राख्छन् । त्यसैले शक्तिशाली सुरुवातको चिन्ता सुरुमै नगर्नुहोला ।
४- लेखिरहेका बेला आफ्नो लेखनीलाई कहिल्यै पनि अरु लेखकका प्रकाशित भईसकेका कृतिसित नदाज्नुस् । ’cause, पहिलो ड्राफ्ट कमजोर नै हुन्छ । हेमिङ्बे त पहिलो ड्राफ्टलाई ‘सिट्’ भन्छन् । ड्राफ्टलाई अनेकपल्ट पुर्नलेखन गरेर प्रकाशित गरिन्छ । त्यसैले अनेकपल्ट पुर्नलेखन गरेर छापिएका कृतिका अगाडी आफ्नो पहिलो लेखनी कमजोर नै लाग्छ ।